भारतबाट भित्रिरहेकाे तरकारी कति सुरक्षित ? कतै तरकारीसँगै कोरोना पनि आइरहेकाे छ कि ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्य अर्थनीतिभारतबाट भित्रिरहेकाे तरकारी कति सुरक्षित ? कतै तरकारीसँगै कोरोना पनि आइरहेकाे छ कि ?
भारतबाट भित्रिरहेकाे तरकारी कति सुरक्षित ? कतै तरकारीसँगै कोरोना पनि आइरहेकाे छ कि ?
भैरहवा, ६ वैशाख । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबैभन्दा उत्तम उपाय हो- लकडाउनको पालन गरी घरमै बस्ने । तर हामी घरमै बसेर पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा त छैनौँ ?हामीले अहिले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न वस्तुमध्ये तरकारी सर्वसुलभ छ । भनेजस्तो तरकारी पाइएको छ । ठेलामा, साइकलमा खाचीमा राखेर दिनहुँ बिहान, दिउँसो, बेलुका तरकारी हाम्रै घर-आँगनमा आउछ । तर हामीलाई के थाहा, त्यो तरकारी कति सुरक्षित छ भनेर ।ती सबै तरकारी अहिले दिनहुँ भारतबाट आयात भैरहेका छन् ।
त्यस्ता तरकारीहरु भैरहवा, बुटवल लगायतका शहर र ग्रामीण बजारहरुमा स्टोर गरी आयातकर्ताले बजारमा बिक्रीको प्रबन्ध गरीरहेका छन् ।छिमेकी देश भारत पनि अहिले कोरोना भाइरसको कारण आक्रान्त छ । त्यहाँ पनि पूरै देशमा लकडाउन छ । तर छिमेकी देशमा फलेका हरिया तरकारी हामीले निर्बाध प्रयोग गरिरहेका छौँ । के ती तरकारीहरु सुरक्षित छन् त ।कृषि विज्ञहरु भन्छन, ‘त्यस्ता तरकारी अहिले प्रयोग गर्नु हानिकारक छ, बिषादी अधिक प्रयोग भएका त्यस्ता तरकारी अहिले सकेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन। बाहिरी सतहमा रहेका कोरोना भाइरसहरू हावाको माध्यमबाट पनि तरकारीमा टाँसिएर रहन सक्छ ।
त्यस्ताे भाइरस हावामा कम्तिमा ४ घन्टासम्म जीवित रहन्छ भने तरकारीजस्ता बस्तुमा अझै बढी समय सक्रिय रहन सक्छ ।’अर्को कुरा, दैनिक रुपमा संकलन गरी ल्याउने तरकारी एकै किसानको बारीबाट आउने नभई विभिन्न स्थानबाट संकलन गरी ल्याउने गरिन्छ । त्यसरी संकलन गर्नेहरुले स्वास्थ्य उपकरण के कस्ता प्रयोग गरेका छन या छैनन त्यो पनि चासोको बिषय हो । त्यस्तै तरकारी ढुवानी गर्ने साधनहरु पनि सेनिट्राईज नगरी नेपाल भित्रने गरेका छन भने चालक तथा एजेन्टहरुबाट पनि थप जोखिम हुने विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।
हाम्रा छिमेकी भारतिय जिल्ला महाराजगन्ज, सिद्धार्थनगर साथै शहरहरु गोरखपर, लखनउ, कानपुरजस्ता ठाउँबाट तरकारी आयात हुन्छ । त्यस स्थानमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढदो छ, त्यसैले पनि भारतबाट आयात हुने तरकारी हाम्रो भान्छामा भित्रिँदा हामीले कतै लकडाउन पालना गरी घरमै बसे पनि तरकारीको माध्यमबाट कोरोना भाइरसलाई भित्र्याउने प्रयास त गरेका छैनौँ, यसतर्फ अति ध्यान दिनु आवश्यक छ ।अहिले लकडाउनका बाबजुद पनि विगतमा जस्तै निर्बाध रुपमा हरियो तरकारी, फलफुल भारतबाटै आइरहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
लकडाउनको समय चैत्र ११ गते देखि बैशाख ३ गतेसम्म ट्रक, मिनी ट्रक र पिकअप भ्यानमा गरी ९९० वटा साना ठुला साधनमा तरकारी र फलफूल आयात भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी पून्य प्रसाद लम्सालले बताए ।लम्सालका अनुसार चैत महिनामा मात्रै भैरहवा नाकाबाट ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आलु, प्याज, तरकारी तथा फलफूल आयात भएको छ । लम्सालका अनुसार चैत महिनामा २१ हजार ३ सय १० मेट्रिक टन हरियो तरकारी, आलु, प्याज र विभिन्न फलफूल आयात हुँदा २ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
आवश्यक कानुनी प्रकृया पुरा गरेर आएको तरकारी हामीले भनेर रोक्न मिल्दैन, उनले भने ।रुपन्देही प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक हेम थापाले आफुलाई जिल्लाबासीले तरकारीको विषयमा सूचना दिइरहेको बताउँदै यो गम्भिर विषय रहेको बताए । तर यो तरकारी आयात रोक्नका लागि हामीले गरेर हुँदैन भन्सार विभागले नै निर्णय गर्नुपर्छ, थापाले भने ।लकडाउनको समय भए पनि उपभोग पूर्ववत रुपमा कायम भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आलु, प्याज, तरकारी तथा फलफूलको आयात दिनहुँ भइरहेको छ ।तर त्यस्ता तरकारी कति सुरक्षित छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण भैरहेको देशबाट आयात भएको हरियो तरकारी कति स्वस्थकर छ त?
यी कुरामा अहिले सबैले ध्यान दिई खरिद गर्ने या नगर्ने आफै निर्णय गर्ने विषय हो । ‘एक-दुई महिना हरियो तरकारी नखाए केही हुँदैन, आफै जोगिनुपर्छ हामी,’ -उपभोक्ताहरु भन्छन् ।छिमेकी देशबाट आउने तरकारीको विकल्पमा हामीले हाम्रै छिमेकका गाउँपालिकाहरुमा फलेका तरकारी प्रयोग गर्न सक्छौ । मर्चवार, लुम्बिनी, छपिया, सुर्यपुरा, धकधई, देबदह लगायतका धेरै स्थानमा किसानहरुले पर्याप्त तरकारी अहिले फलाएका छन् ।ती तरकारीहरुको अहिले बजारीकरणको अभाव छ । स्थानीय तहहरुले त्यहाबाट तरकारी खरिद गरी ल्याएर आप्mना प्रत्येक वार्ड मार्फत बिक्री-वितरण गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयले पनि कृषि उपज बिक्रीका लागी पहल गरीरहेको छ । कृषि एम्बुलेन्स तयार छ । त्यसैले स्थानिय तहले यो बिषयमा सोच्नुपर्छ । नगरबासीलाई यहीकै तरकारी खुवाउने कि भारतीय विषादाीयुक्त तरकारी खुवाउने ? याे जिम्मा नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँपालिकाको हो ।भैरहवा नाका हुँदै भारतबाट आउने तरकारी बुटवल, पोखरा, काठमाडाैँसम्म जाने गरेको छ । यस्ताे वेला ख्याल गर्नुहोस्, तपाईको घरमा तरकारीको नाममा कोरोना भाइरस भित्रिरहेको त छैन ?
युट्युबबाट सिकेको खेती कुहेरै सकिने चिन्ता
सरकारले स्थापना गरेको को’रोना कोषमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ७७ हजार जम्मा, कसले कति गरे ?
१५४४५ पटक पढिएको
१४७९८ पटक पढिएको
१३९६७ पटक पढिएको
१११३२ पटक पढिएको
७९६७ पटक पढिएको